Solomon Mire bids farewell to international cricket - Cricingif
Solomon Mire bids farewell to international cricket
Zimbabwe cricket is going through some of their darkest times as their membership has been suspended by the International Cricket Council (ICC) due to political interference. As a result of this, all of the Zimbabwe players and management have been unemployed all of a sudden.
Amidst this chaos, Zimbabwe all-rounder Solomon Mire has announced his retirement from international cricket across all formats. The 29-year-old announced his retirement through an Instagram post. He revealed in his long caption that he had informed about his decision to quit Zimbabwe Cricket to his teammates and staff post the Ireland tour.
Mire played two Tests, 47 ODIs and nine T20Is for Zimbabwe scoring one century and five fifties across formats, and taking a total of 14 wickets with his fast-medium seamers. His top score of 112 came during Zimbabwe’s historic series win over Sri Lanka in 2017.